Entsha San Francisco, Los Angeles, Miami, Amsterdam kunye neLondon iinqwelomoya kwi-Air Transat ngoku
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Entsha San Francisco, Los Angeles, Miami, Amsterdam kunye neLondon iinqwelomoya kwi-Air Transat ngoku
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Entsha San Francisco, Los Angeles, Miami, Amsterdam kunye neLondon iinqwelomoya kwi-Air Transat ngoku.
Ngokuhlalutya iindlela zokuhamba, kuyacaca ukuba i-United States iseyeyona ndawo iphambili yeQuebecers nabaseCanada emva kobhubhane.
I-Air Transat yandisa inkqubo yayo yase-United States kunye neendawo ezimbini ezintsha zokuya, eLos Angeles naseSan Francisco, kunye neenqwelomoya zonyaka wonke eziya eFlorida.
I-Air Transat ibhengeza inkonzo engapheliyo phakathi kweMontreal - Amsterdam kunye neQuebec City - London.
Indiza yaseMontreal - Amsterdam iya kubaleka kathathu ngeveki kunye neQuebec City - London flight, kanye ngeveki.
I-Air Transat ibhengeze ukuba iindlela ezine ezintsha ziya kongezwa kwinkqubo yayo ye-2022 yenqwelomoya yasehlotyeni. Okokuqala ngqa, inqwelomoya iza kube isebenzela iSan Francisco, Los Angeles kunye nezikhululo zeenqwelomoya zaseAmsterdam zisuka eMontreal. Ngaphaya koko, iya kubonelela ngenqwelomoya ethe ngqo phakathi kweQuebec City neLondon, iqinisa indima yayo njengeyona nto iphambili yokuthwala inqwelo moya evela kwisikhululo seenqwelomoya iJean-Lesage. Ekugqibeleni, i-Air Transat iya kusebenza kwiindlela eziya e-Fort Lauderdale naseMiami unyaka wonke.
“Ngokuhlalutya iindlela zokuhamba, kuyacaca ukuba i-United States iseyeyona ndawo iphambili yeQuebecers nabaseCanada emva kobhubhane. Ngenxa yokuguquguquka kwezithuthi zethu ezikumgangatho wehlabathi, sikwimeko egqibeleleyo yokuhlangabezana nale mfuno kwaye silungelelanise ngokukhawuleza iimfuno zabakhweli bethu, yiyo loo nto inkonzo yethu emazantsi emida iza kwanda ukuqala ngo-2022, utshilo u-Annick Guérard, uMongameli. kunye neGosa eliyiNtloko lesiGqeba kwi Air Transat.
Air Transat iyayiphucula inkqubo yenqwelo moya yase-United States ngokongezwa kweCalifornia. Inqwelomoya yaseMontreal-San Francisco iya kwenziwa kabini ngeveki, ngelixa inqwelomoya yaseMontreal-Los Angeles iza kubaleka kathathu ngeveki.
Ngenxa yemfuno ezinzileyo yeenqwelo moya eziya Florida, iindlela ezithile ebezifudula zifumaneka ebusika kuphela ngoku ziya kuhanjiswa unyaka wonke. Ngexesha lasehlotyeni, indiza yaseMontreal - Miami iya kwenziwa kathathu ngeveki kunye neQuebec City-Fort Lauderdale flight, kanye ngeveki.
Ngelo xesha, umthwali wandisa inkonzo yakhe eYurophu ngokongeza inkonzo ngokuthe ngqo kumacandelo amabini, i-Netherlands kunye ne-United Kingdom, okwenza i-Air Transat ibe yi-airline yaseCanada kuphela ukuba ibhabhe ngqo ukusuka eMontreal ukuya kwikomkhulu laseDatshi.